Uchungechunge Lobuciko: Izihloko Ezihlonishwayo zePremier Global + amaNuances kanye neTechn ...
Uchungechunge Lobuciko: Izihloko zePremier Global Hot Topics + amaNuances namasu kuma-Injectable 2020
Ukuzulazula ku-Aesthetic Series: IPremier Global Hot Topics + Nuances and Techniques in Injectables
Leli khasi kuhloswe ngalo ukuba ngumthombo osizayo nomhlahlandlela wolwazi lwakho oluku-inthanethi.
Zithini izikhathi zeseshini?
Izihloko zikaPremier Global Hot Hot - 9:00 am - 12:00 pm CST
Izethulo Zemboni - 12:00 pm - 1:00 pm CST
AmaNuances namasu kuma-Injectable - 1:00 pm - 4:00 pm CST
Iyiphi Idivayisi Engingayisebenzisa Ukufinyelela Ukusakazwa Okubukhoma?
Ukusakazwa bukhoma komcimbi kungatholakala ngamadivayisi amaningi eselula, kufaka phakathi amathebulethi nama-smartphone. Kodwa-ke, sincoma ngokuqinile ukusebenzisa ikhompyutha yedeskithophu noma ilaptop enoxhumano lwe-hardline internet ukuze lusebenze kahle futhi kube nesipiliyoni.
Isihloli Sokuhambisana Kwesistimu
Ngaphambi ukuya emcimbini, qiniseka ukuthi uhlola ukuhambisana kwesistimu yakho nengxenyekazi yezokusakaza bukhoma. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi unazo zonke izinto ezifanele ezidingekayo zokufinyelela umcimbi obukhoma. Chofoza kufayela le- “Isihloli Sesistimu” ithebhu kwesobunxele. Qiniseka ukuthi usebenzisa izibuyekezo ezidingekayo kusistimu yakho yezinto ezihlulekayo ngaphambi komcimbi obukhoma.
Isikhathi ngasinye sivula imizuzu eyi-15 ngaphambi kwesikhathi sokuqala. Ukuze ufinyelele kumaseshini akho asakazwa bukhoma chofoza ku- “Izikhathi” ithebhu, elandelwa yi- "Iya Eseshini" inkinobho eceleni kweseshini oyifunayo.
Ukuhambisa umbuzo wezipikha, zulazulela kufayela le- "Imibuzo" ithebhu ngakwesokunxele kwesikrini sakho somdlali. Khetha "Chofoza Lapha Ukuhambisa Umbuzo", faka umbuzo wakho bese uqhafaza Thumela. Futhi uzoba nekhono "lokuvota phezulu" imibuzo esivele ifakiwe.
Xoxa Nabanye Abahambele Umhlangano
Lapho ususungule iseshini, uma ungathanda ukuxoxa nabanye obekhona nabo, zulazulela kufayela le- "Xoxa" ithebhu ngakwesokunxele kwesikrini sakho somdlali bese uqala ukuxoxa! Ukuze ubonakale kuwo wonke umuntu, udinga ukunika amandla imininingwane yakho ekhasini lababekhona.
Izethulo Zemboni / Umbukiso Wemboni
Hlala ku-inthanethi ngemuva kokuphethwa kwezihloko ezishisayo ukuze ubuke Izethulo Zezimboni. Futhi qiniseka ukuthi uvakashela ama-Exhibitor Showcases ukuze uxoxe nomele imboni futhi ufunde ngemikhiqizo yabo kanye neminikelo.
AmaNuances namaTech in Injectable (03:19:15)
Izethulo Ezimele I-Premier Global Hot Topics & Industry (03:58:27)
Ama-Nuances namasu kuma-Injectable
AmaNuances namasu ku-Injectable 2020
UNdunankulu Global Hot Topics + Nuances and Techniques in Injectables
Izihloko zeNdunankulu Global Hot Topics + Nuances and Techniques in Injectables 2020
Uchungechunge Lobuciko: Izihloko Ezifudumele ZikaNdunankulu